Akanankinga nokuphenywa umholi we-Amcu | News24
Akanankinga nokuphenywa umholi we-Amcu
Johannesburg - Umengameli wenyunyana i-Association of the Mineworkers and Construction Union (Amcu), uJoseph Mathunjwa uvumile ukuba aphenywe kulandela izigameko eziningi zokubulala eziyamaniswa nezimbangi zenyunyana.
Abaholi be-Amcu basolwa ngezigameko zokubulala endaweni yaseMarikana. Kusoslwa izimpi zangaphakathi nokungafuni ukushintsha ubuholii njengezinye zezizathu zokubulala.
OLUNYE UDABA:Amalungu e-Amcu ahlelele ovalweni
Umphenyi ozimele uPaul O'Sullivan oqashwe yinyunyana kulandela ukubulawa kwamalungu abalelwa kwangu-10 eMarikana kule minyaka emihlanu, uthi nakuba engeke akwazi ukuchitha izinsolo ezibhekene nenyunyana, abamangali kufanele bakhiphe ubufakazi ngabakushoyo.
"Noma ngabe ngubani umbulali, kufanele aboshwe athweswe amacala. Umengameli we-Amcu wakucacisa ukuthi singamubopha uma simthola enecala."
Khonamanjalo, uNgqongqoshe wamaPhoyisa uFikile Mbalula uthe labo abasolwa ngezigameko zokubulala kuleya ndawo kuzobhekanwa nabo.